I-Coriander ivela e-Near East, ubufakazi bokuqala besitshalo, ukulima nokusetshenziswa kwayo ngabantu eminyakeni engaphezu kuka-6 000 edlule kusukela eGibhithe kuya eTurkey, Asia Ephakathi nasePheresiya. Ngemva kwalokhu, ukusetshenziswa kwe-coriander nakho kwasakazekela eNdiya naseChina eminyakeni engaphezu kwengu-3 000 eyedlule bese kamuva eya eNingizimu Yurophu. Namuhla i-coriander isetshenziswa futhi iyalinywa emhlabeni jikelele.
Igama lesayensi: Coriandrum Sativum
Igama elivamile: Coriander, Dhania noma uCilantro
Isitshalo seCoriander sonyaka odonsa kancane futhi sikhule sibe semitha elilodwa ukuphakama uma kuvunyelwe ukuya enzalweni. Izimbali zibomvu noma zibomvu kakhulu. Ikhiqiza nxazonke izithelo ezivundlile eziqukethe imbewu ye-coriander esetshenziselwa ukunambitheka nokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Ama-fresh and fresh leaves kaCoriander, kanye nezithelo ezincane kanye nembewu eyomile, isetshenziselwa izitsha eziningi zokudla njenge-flavouring. Izithelo noma imbewu nazo zisetshenziselwa ukukhipha amafutha abo abalulekile namafutha anamandla asetshenziselwa imakethe yemithi yemvelo kanye nomkhakha wokucubungula ukudla. Amafutha asetshenziselwa ukwelashwa okulwa ne-bacterial futhi azisize ukugaya, kanti kuthiwa uyindlela yokwelapha.
Izidingo Zomhlabathi Nokulungiselela
I-Coriander ikhula kahle kakhulu emhlabathini owunamanzi, lo sandam loam nge-pH phakathi kuka-6.0 no-7.5. Emhlabathini owunzima kakhulu, kungcono ukuqeda imigqa yezitshalo ukusiza amanzi okugeleza kude nezimpande.
Ngaphambi kokuba kulungiswe umhlabathi, isampula emele umhlabathi kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhokisithri ukuze kuhlaziywe kanye nezincomo zokudla. Inhlabathi kufanele ikhishwe ukuze ikhulule iphrofayli yomhlabathi ibe ngu-500 mm. I-lime ye-pH yokuvuselela futhi umquba noma umquba kufanele usetshenziswe futhi uhlonywe emhlabathini ophezulu ka-400 mm cishe amasonto amane kuya kwahlanu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala, engeza izici zokulandelela kanye nomanyolo olinganiselwe wokutshala emhlabathini kanye ne-disc noma i-rotavator enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm. Lokhu kuhlanza noma yikuphi ukhula olungase lubekwe. Uma ukuqhuma kwenzeka, lokhu kuyenzeka futhi kulesi sigaba kanti manje imbewu yenzelwe ukutshala.
I-Coriander ikhula kahle ezindaweni ezipholile, ezifudumele futhi yenza kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-18°C no-27°C.
Uma izinga lokushisa liphakeme kakhulu, khona-ke isitshalo sizoya ensimini ngokushesha ngaphambi kokuba ikhule ngokwanele ukukhiqiza noma ukukhiqiza amaqabunga okwanele, uma ishiya imbali futhi ivuthiwe ngokugcwele.
Kunezinhlobo eziningi zama-cultivars we-coriander, kodwa izinhlobo ezimbalwa eziyinhloko ze-coriander ezakhiwe ezentengiselwano, I-Caribe, isiShayina, Isikhathi sokungcebeleka, Isikhathi eside, iSlow Bolt, iSantos
Kungcono nakakhulu ukuthola iseluleko se-extension officer kanye nezakhamuzi zezitshalo zezinhlobonhlobo ezingcono kakhulu endaweni yokukhiqiza kanye nemakethe okuhlosiwe. Ezinye izinhlobo zingcono ukukhiqiza amaqabunga kanti ezinye zingcono ukukhiqizwa kwembewu kanye namafutha.